ukujongana: fumana i-iphone yasimahla ye-8 kwi-at & t (imigaqo kunye neemeko ziyasebenza)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Fumana i-iPhone yasimahla ye-8 kwi-AT & T (imigaqo nemiqathango iyasebenza)
Idili: Fumana i-iPhone yasimahla ye-8 kwi-AT & T (imigaqo nemiqathango iyasebenza)
Ixesha lokugqibela i-AT & T ibonelela nge- simahla iApple iPhone , yayiyindala kwaye ibiza ixabiso eliphantsi i-iPhone SE eyayinokuba yeyakho nge-0 yeedola kwiimeko ezithile. Ngexesha elilinganiselweyo, i-AT & T ngoku ihambisa imodeli entsha nexabiseke ngakumbi yasimahla- i-iPhone 8 64 GB, ihlala ixabisa i-600 yeedola kwi-AT & T nakwi-Apple. Ngokwendalo, iimeko ezithile kufuneka zihlangatyezwe kule meko, nazo.
Unokufumana i-iPhone yasimahla ye-8 64 GB kwi-AT & T kuphela xa unokongeza umgca omtsha wenkonzo-kwiakhawunti entsha okanye esele ikho- ngesicwangciso se-AT & T esingenamkhawulo sobuncinci be- $ 80 ngenyanga. I-smartphone kufuneka ithengwe kwi-AT & T Elandelayo (ngentlawulo yenyanga eyi- $ 20 kwiinyanga ezingama-30) okanye kwi-AT & T elandelayo Nyaka ngamnye (ngentlawulo yenyanga eyi- $ 25 yeenyanga ezingama-24). Ukuba zonke iimeko ziyafezekiswa, uyakufumana i-600 yeedola emva kwityala lenyanga ngaphezulu kweenyanga ezingama-30 okanye ezingama-24, ukuqala kumjikelo wesithathu webhili.
Fumana le ntengiso ye-iPhone 8 kwi-AT & T apha
Esi sipho siisebenza ngoJuni 6, 2019isasebenza njenganamhlanje, nge-10 kaJuni, 2019. Yi-iPhone 8 64 GB kuphela enokuba nayo simahla (kwisithuba esingwevu, isilivere, okanye igolide). I-iPhone 8 256 GB ayiyonxalenye yesivumelwano, ke oku kwahluka kuthengiswa ngexabiso elipheleleyo le- $ 749. I-iPhone 8 Plus nayo ayifakwanga kwisibonelelo.
Ikhutshwe ngo-Septemba ka-2017, i-iPhone 8 ayinawo uyilo lwangoku lweeApple kunye neefossssapho zakutshanje eziphathwayo (i-iPhone XS, i-iPhone XS Max, kunye ne-iPhone XR), kodwa zona zisisixhobo esinamandla nesibekekileyo. Ukuba ulungile kunye ne-apos; ubungakanani bescreen se-iPhone 8-intshi ye-4.7-kwaye ufuna isicwangciso esingenamda kwi-AT & T, ukufumana esi sixhobo simahla asivakali mbi kwaphela.
eyona s8 kunye nebhetri
ikhona i5g kufutshane nam
Umhla wokukhutshwa kwe-Samsung Galaxy Z Fold 3, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Apple iPad 8 ikhuselekileyo
Isitokhwe sokubala se-iOS sinamaqhinga aliqela aphakamisa imikhono
I-T-Mobile yongeza usuku lokucinywa kwenethiwekhi ye-Sprint LTE kwisicwangciso sayo sobukhulu besibindi se5G